Adeegsiga Warbaahinta Bulshada ee Ganacsiga Yaryar iyo Natiijooyinka | Martech Zone
Isticmaalka Warbaahinta Bulshada Ganacsiga Yaryar iyo Natiijooyinka
Jimcaha, Sebtember 30, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
CrowdSPRING ayaa ku daabacday xogtan macluumaad ku saabsan caadooyinka warbaahinta yar yar ee ganacsiga bulshada. Markii ugu horreysay ee aan arko tirakoobyada la adeegsanayo, xoogaa waan la yaabay sida ay u yar tahay tirakoobka isticmaalka ganacsiga yar yar. U fiirso qoto dheer waxaanan u maleynayaa inaysan layaab aheyn, in kastoo. Waa kheyraad aad u xoogan oo lagu socodsiinayo ganacsi yar oo guuleysta sidaa darteed joogitaanka joogitaanka warbaahinta bulshada waxay noqon kartaa mid dhib badan.
Taasi waxay tiri - waa fursad aan caadi aheyn dadka kale ee ganacsi yar haysta. Waxay muujineysaa inaysan jirin wax tartan ah halkaas! Bilow baloog oo iska leh suuqaaga. Ka qaybgal warbaahinta bulshada oo dhis dhagaystayaashaada. Maaha inaad rogto meheraddaada habeennimo, laakiin waa maalgelin waxtar yeelan doonta. Waxay qaadan kartaa toddobaadyo, waxay qaadan kartaa bilo… laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka qayb gasho. Haddii aadan sameyn, tartamayaashaadu way sameyn doonaan.
Logo Crowdsourced iyo Naqshadeynta Sawirka by crowdSPRING
Sida loo Calaamadiyo Bogagga oo aad mar dambe u Akhriso
Sep 30, 2011 at 5: 58 PM
Xaqiiqdii tani waxay haysaa macluumaad badan oo xiiso leh… Mid ka mid ah tirakoobka inkasta oo taasi, aniga ahaan, ay umuuqato gebi ahaanba wax aan laga fiirsan waa tirakoobka 51% dadka isticmaala facebook ay u badan tahay inay iibsadaan alaabada noocyada ay raacaan ama ay yihiin taageerayaasha.
Runtii? Kaliya 51%? Haddii aan u maleyno in inta kale aysan dan ka lahayn, taasi ma fiicna. Laakiin maxaa dhacaya haddii aan u maleyno in inta soo hartay ay dhab ahaan YAR yihiin suurtagalnimada alaabooyinka? Kani maahan tiro aad u wanaagsan markaa.
Waxaan si gaar ah u maleynayaa inay ka sareyso, sababtoo ah dadka badankood waxay u badan tahay inay raacaan noocyada ay mar hore jecel yihiin. Xaalad sidee ah, tirakoobkani runti macnaheedu ma yahay wax uun? Waxaad raacdaa noocyo aad u badan tahay inaad wax ka iibsato, sida iska cad. Haddaba waa maxay asalka arrintani? Miyay u badan tahay inay iibsadaan natiijo toos ah oo ah inay taageere u yihiin facebook gaar ahaan? Hadday sidaas tahay, taasi waxay dhab ahaan macnaheedu noqon lahayd wax.
Laakiin uma maleynayo inay jiri lahayd qaab lagu qiyaaso taas. Marka, sida ay hadda tahay, runtii uma maleynayo qofna inuu wax badan ka akhriyo lambarkan.
Tani hubaal waxay leedahay macluumaad badan oo xiiso leh